ကြားဖူးနားဝ အဆိုစကားများနှင့် ၎င်းတို့၏ အဓိပ္ပါယ်များ (အပိုင်း ၂) - Myanmar Network
ကြားဖူးနားဝ အဆိုစကားများနှင့် ၎င်းတို့၏ အဓိပ္ပါယ်များ (အပိုင်း ၂)
Posted by Language Republic on November 20, 2014 at 17:52 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
နေ့စဉ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုသုံးစွဲရာတွင်ကျွန်တော်တို့ ရာပေါင်းများစွာသောစကားလုံးများ ၊ အဆိုများကိုအသုံးပြု၏။ ထိုကဲ့သို့ သုံးစွဲစဉ်တွင်လည်း ၎င်းစကားလုံးများ၊ အဆိုအမိန့်များမည်ကဲ့သို့ ပေါ်ပေါက်လာသည် မည်သည့် အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်ကိုတစ်ခါတစ်လေမျှပင် စဉ်းစားမိမည် မဟုတ်ချေ။
ဘာသာစကားဆိုသည်မှာ ရှင်သန်နေသော အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အစဉ်အမြဲပြောင်းလဲကာ တိုးပွားလျှက်ရှိသည်။ နေ့စဉ်သုံးစွဲလျှက်ရှိသော ဘာသာစကားတွင် စကားလုံးအသစ်များ၊ စကားရပ် အသစ်များအစဉ် ပေါ်ထွက်လျှက် ရှိသည်နှင့် အတူအချို့သောစကားလုံး ၊ စကားရပ်များသည် လည်းပြောင်းလဲ သွားသောခေတ်နှင့်အတူ အသုံးနည်းသွားကာနေ့စဉ် အသုံးများမှ မှေးမှိန်ကွယ် ပျောက်ကာ Language History Dictionary များတွင် ထာဝရ အနားယူသွားကြလေသည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို ရေးသားပြောဆိုအသုံးပြုရာတွင် စာဖတ်သူတို့ ကြားဖူး ၊ ဖတ်ဖူး သော စကားလုံးများနှင့် အဆိုအမိန့်များ common sayings များကိုမကြာခဏသုံးလေ့ရှိရာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းမည်ထင်သော familiar words and sayings အချို့၏ နောက်ခံသမိုင်းနှင့် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ တို့ကို လေ့လာနိုင်ရန် တင်ပြ လိုက်ပါသည်။
ဒီနေ့ အပိုင်း (၂) မှာတော့ Apple ပါသော စကားလုံး၊ အသုံးအနှုန်းများ၏ အဓိပ္ပါယ်၊ သမိုင်းနှင့် ဥပမာများကို ဖတ်ရှုရမှာပါ။
ယောင်္ကျား တွေရဲ့ လည်ဇလုပ် (အသံအိုး) ဘယ်ကဖြစ်လာသလဲ ဆိုတော့ Bible သမ္မာကျမ်းစာ ထဲက အာဒမ်ရဲ့ ပုံပြင်ထဲ မှာ ဘုရားက တားမြစ်ထားတဲ့ ဧဒင်ဥယဉ်ထဲက အသီးကို အာဒမ်က စားမိလိုက်လို့ သူရဲ့ လည်မျိုမှာ လည်စိ(စေ့) ကြီးဖြစ်သွားရတယ်ပေါ့။ ဒီပုံပြင်အရဆိုရင် အာဒမ်ကို ဧဝက ကြွေးလိုက်တဲ့ ပန်းသီးရဲ့ အစေ့က သူ့လည်မျိုမှာ နင်သွား ရာက စပြီး ယနေ့တိုင် ယောင်္ကျား တွေရဲ့ လည်မျိုဟာ အဲဒီပုံစံအတိုင်း ဖြစ်နေရောတဲ့။ အင်္ဂလိပ်စာမှာ ယောင်္ကျား တွေရဲ့ လည်ဇလုပ် (အသံအိုး) ကို adam's apple လို့တင်စားပြီး ခေါ်ပါတယ်။
The thyroid gland is located under the Adam's apple in the front part of the neck.
Her gaze traveled along the curve of his neck, over his Adam's apple to his jaw line, as he tilted his head back to drain the rest of the bottle.
To make sure you're not confusing the thyroid gland with your Adam's apple, repeat the test.
Bible သမ္မာကျမ်းစာ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ခေတ်တုန်းက လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ အလွန်တန်ဖိုး ရှိတဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုက မျက်စိ သူငယ်အိမ် လို့ဆိုပါတယ်။ သူငယ်အိမ်က ပန်းသီးတစ်လုံးကဲ့သို့ ဝိုင်းစက်ပြီး မျက်စံရဲ့ အလည်တဲ့တဲ့မှာ တည်ရှိနေတယ်။ မျက်စိ ဆိုတာက အမြင်အာရုံကို ဖော်ပေးတဲ့ အရေးကြီး အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း မဟုတ်ပါလား။ ဒါကြောင့်လည်း မျက်ခွံ၊ မျက်တောင်၊ မျက်ခုံး စတာတွေနဲ့ သူ့ကိုကာကွယ်ပေးထားတယ် မဟုတ်လား ။ ဒီအချက်ကို အစွဲပြုပြီး အင်္ဂလိပ်စာမှာ တန်ဖိုးရှိပြီး သေသေခြာခြာ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရမည့် အရာမှန်သမျှကို apple of one's eye နဲ့တင်စား ရေးသား ပြောဆို ကြပါတယ်။
If you say that someone is the apple of your eye, you mean that they are very important to you and you are extremely fond of them.
He adored her, she was the apple of his eye and she loved her dad.
Your child is quite rightly the apple of your eye.
And I know that to every mummy and daddy, they are the apple of their eye, the perfect centre of their Universe.
တစ်စုံ တစ်ခုက apple-pie order နဲ့ရှိနေမယ်ဆိုရင် သူ့နေရာနှင့်သူ စံနစ်တစ်ကျ သပ်သပ် ရပ်ရပ် ခင်းကျင်း စီမံထားတယ်လို့ ပြောတာပါ။ အရသာရှိလှတဲ့ apple pie ကို စီမံချက်ပြုတ် တာနဲ့ ဒီအဆိုက ဘာမှ မပတ်သက်ပါဘူး။ ဒီစကားရဲ့ ဇစ်မြစ်က ပြင်သစ် စကားလုံး ၂ လုံးက နေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။ ရှေးဟောင်း ပြင်သစ် စကားမှာ cap 'a pied ဆိုတဲ့ ခေါင်းအစ ခြေအဆုံး လက်နက် တပ်ဆင်ထားသည်လို့ အဓိပ္ပါယ် ရတဲ့ medieval ခေတ် စစ်သုံး ဝေါဟာရ တစ်ခုရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက သေခြာ သပ်ရပ်စွာ ခေါက်ထားသော ပိတ်စ သို့မဟုတ် သေသပ်စွာ ပြန့်နေအောင် မီးပူတိုက်ပြီး ခေါက်ထားတဲ့ အိပ်ယာခင်း၊ စောင်၊ ကန့်လန့်ကာစ၊ စားပွဲခင်း စသည်ဖြင့် အဓိပ္ပါယ် ရတဲ့ nappes pli'ees တို့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီပြင်သစ် expression ၂ ခုစလုံးကို အသံထွက်ရင် အင်္ဂလိပ် နားထဲမှာ apple pie လို့ ကြားပြီး အဲဒီ စကားလုံး နဲ့ပြောင်းလဲ မွေးစားပြီး သုံးရာကနေ အင်္ဂလိပ်စာပေထဲမှာ apple-pie order ရယ်လို့ တစ်ခု ထပ်တိုးလာတာနေမှာပေါ့။
His apple pie order was just over the top.
Whether or not you use an accountant or bookkeeper to help you with your accounts and tax, you must keep all your business records in apple-pie order.
And each evening, just before retiring, he is likewise compelled ‘to arrange his materials for work’ the next morning ‘in apple-pie order uponacommodious table’ across from his bed.
Lock Stock & Barrel: familiar sayings and their meanings စာအုပ်မှ ကိုးကားဘာသာပြန်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဖိတ်ကြားစာရေးသားနည်း၊ ဖိတ်ကြားခြင်းကိုလက်ခံခြင်း၊ ဖိတ်ကြားချက်ကိုြ...
နေ့စဉ်အကြောင်းအရာများပြောဆိုခြင်း နှင့် တွေ့ဆုံရန်ချိန်းဆိုခြင်း
Expressing Preferences (ပို၍ နှစ်သက်မှုကို ဖော်ပြခြင်း) - You like s...